October 2021 - Achawlaymyar
မြန်မာ့ရွှေဈေး နှင့် ဒေါ်လာဈေး တစ်လအတွင်း သိသာစွာပြန်ကျနေခြင်းအပေါ်သုံးသပ်ချက်
October 31, 2021 by Achawlaymyar
စံချိန်တင် မြင့်တက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ရွှေစျေး နှင့် ဒေါ်လာစျေး တစ်လအတွင်း သိသာစွာပြန်ကျနေခြင်းအပေါ်သုံးသပ်ချက် မြန်မာ့ရွှေစျေးသည် ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ကုန်နှောင်းပိုင်းမှာ စံချိန်တင် မြင့်တက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ရွှေစျေးနဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာစျေးဟာ ယခု အောက်တိုဘာလ မကုန် ခင် နှစ်ပတ်အတွင်းမှာ သိသိသာသာ ပြန်ကျလာပါတယ်။ အကယ်ဒမီ မီးလင်းရွှေတစ်ကျပ်သားကို စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့က ၂၂ သိန်း ၃ သောင်းအထိ အမြင့်ဆုံး တက်ခဲ့ပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ရက် အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်နေ့မှာ တော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (YGEA)ရဲ့ စာရင်းအရ ၁၇ သိန်း ၇၀၀၀ ကျပ် ဝန်းကျင်ထိ ခဏတာကျခဲ့တာကိုလဲတွေ့ရပါတယ်။ ရွှေစျေးလိုပဲ ဒေါ်လာနဲ့ကျပ်ငွေလဲနှုန်းကလည်း စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့က ပြင်ပစျေးကွက််မှာ တစ်ဒေါ်လာ … Read more
သူနဲ့မတူတာကြောင့် ဖခင်ဖြစ်သူမှ သံသယဖြင့်သမီးလေးက ကို DNA စစ်ဆေးကြည့်သောအခါ
Xu အမည်ရှိဖခင်တစ်ဦးမှာ ငါးနှစ်အရွယ် သမီးတစ်ယောက်ရှိပြီး သူမရဲ့ကြီးမားတဲ့မျက်လုံးများ ၊ မျက်ရစ်များနှင့် သူမရဲ့မျက်နှာဟာ အလွန်သိမ်မွေ့ပြီး ချောမောလှပနေတာကြောင့်အားလုံးက သူ့သမီးကိုမြင်တဲ့အခါ သဘာဝအလှနဲ့မွေးလာတာလို့ ချီးကျူးကြပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ဖခင် Xu ဟာ လူတိုင်း၏ချီးကျူးမှုကိုအယုံအကြည်မရှိနေခဲ့ဘဲ သံသယစိတ်တွေသာဝင်လာခဲ့ပါတယ်။Xu ဟာ သူနဲ့သူ့ဇနီးတို့နှစ်ယောက်လုံးမှာ မျက်ရစ်မရှိပေမယ့် သမီးလေးမွေးပြီးတဲ့နောက်မှာ သူမမှာမျက်ရစ်ပါရှိနေတာကြောင့် Xu ကပိုလို့တောင်စိတ်ရှုပ်နေခဲ့ရပါတယ်။ နောက်တော့ Xu ဟာ သူ့သမီးလေးက အသက်ကြီးလာလေ ပိုပိုလှလာနေတာကိုမြင်တော့ ပိုမပျော်သလို သံသယတွေပိုတိုးလာခဲ့ရပြီး ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ အခုချိန်မှာ သူ့အား ပြဿနာကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်သွားစေပါတယ်။ ထို့ကြောင့် Xu ဟာ ကလေးကို DNA စစ်ဆေးရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ နောက်ဆုံးမှာ Xu ၏သံသယကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီး စစ်ဆေးမှုရလဒ်များအရ သူသိထားတဲ့သမီးက သူနှင့်သွေးသားလုံးဝမတော်စပ်နေခဲ့ပါဘူး။ ထို့နောက် သူ့သမီးရဲ့ DNA စစ်ဆေးချက်ကိုယူပြီး သူ့ဇနီးကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လည်း ဇနီးသည်က … Read more
ပါတော်မူပြီးနောက် ဗြိတိသျှတို့အား ပထမဦးဆုံး တော်လှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့သူ (သို့) ဝန်းသိုစော်ဘွားကြီး….
ပါတော်မူပြီးနောက် ဗြိတိသျှတို့အား ပထမဦးဆုံး တော်လှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့သူ (သို့) ဝန်းသိုစော်ဘွားကြီး မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ပါတော်မူပြီးနောက် အင်္ဂလိပ်တို့အား ပထမဆုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့သူမှာ ဝန်းသိုစော်ဘွားကြီး ဦးအောင်မြတ်ဖြစ်သည်။ မဟာဝံသသီရိဇယသိုဟုံဘွား ဘွဲ့စံ ဝန်းသိုစော်ဘွားကြီးအား ဦးရွှေသာ နှင့် ဒေါ်ဒွန်းဖြူ ခေါ် သုဝဏ္ဏာကယဒေဝီ တို့မှ ၁၈၆၂ခုနှစ်တွင် ဝန်းသိုမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ငယ်စဉ်က ဝန်းသိုဆရာတော် ဦးဂုဏ ထံတွင် ပညာ သင်ခဲ့ပြီး အရွယ်ရောက်လာသည့်အခါ စော်ဘွားကြီးက သားဖြစ်သူကို ကင်းဝန်မင်း ကြီးထံအပ်နှံကာ နန်းဓလေ့ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးပညာရပ်များကို သင်ယူစေခဲ့သည်။ ထို့နောက်သီပေါမင်းထံ၌ ကွမ်းရေတော်ကိုင်စာရေး အဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ဦးအောင်မြတ်သည် စာပေ ကျမ်းဂန် ၊ကဗျာ ၊လင်္ကာ ၊ ဗေဒင် ၊ သမိုင်း ၊ အုပ်ချုပ်ရေး ၊ … Read more
မျက်နှာကို ကြည့်ရုံနဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝသူတစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်ချေ ရှိမရှိ သိနိုင်မယ့် နည်းလမ်း
မျက်နှာကို ကြည့်ရုံနဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝသူတစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်ချေ ရှိမရှိ သိနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ… လူတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာကို ကြည့်ရုံနဲ့ သူ့အကြောင်း ကို အတိအကျပြောနိုင်တဲ့ ရုပ်လက္ခဏာကို ဖတ်တဲ့ ပညာမျိုးဆို တာ အံ့သြဖို့ကောင်းတဲ့ ပညာရပ်တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ် …။ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်က ကံကကြမ္မာကို မသတ်မှတ်နိုင်ပေမယ့် ဘာတွေ ဖြစ်လာ နိုင်သလဲဆိုတာကိုတော့ အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ် …။ ဒါကြောင့် တရုတ် ရိုးရာရုပ်လက္ခဏာဖတ် ပညာအရ လူချမ်းသာ တစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်ချေများတဲ့ သူတစ်ယောက်ရဲ့ ရုပ်လက္ခဏာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ (၁) နှစ်ဖက်ညီညာတဲ့ မျက်နှာအချိုးအစား” မျက်နှာအချိုးအစား နှစ်ဖက် ညီညာနေတာ မျိုးက ရှားပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲ့ဒီလိုမျက်နှာမျိုး ရှိခဲ့ရင် သူမတူအောင် ချမ်းသာကြွယ်ဝလာတတ်ပါတယ် …။ … Read more
လူတွေတော်တော်လေး စိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ ကျော်ရဲအောင်နဲ့ပိုးဝတီစံတို့ရဲ့အရှုပ်တော်ပုံ
လူတွေတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ ကျော်ရဲအောင်နဲ့ပိုးဝတီစံတို့ရဲ့အရှုပ်တော်ပုံ နိုင်ငံကျေ.ာ် ရုပ်ရှင်မင်.းသား ကျော်ရဲ.အောင်ကတေ.ာ့ ဗီဒီယိုဇာတ်လ.မ်းများနဲ့ ရုပ်.ရှင်များကို ရို.က်ကူးခဲ့ပြီး… လက်ရှိ.မှာလည်း အော.င်မြင်တဲ့ မင်းသား.ကြီးတစ်.ယောက်အဖြ.စ် ရပ်တည်.နေဆဲ ဖြစ်ပ.ါတယ်။… အခု.တစ်ခါမှ.ာတော့ ကျော်ရဲ.အောင်က အိမ်ထေ.ာင်ရေး ဖောက်ပြ.န်မှုတွေ ရှိတယ်.ဆိုတဲ့ ကောလ.ဟာလ ထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါ၊။… အ.ဆိုပါ ကော.လဟာလကို.တော့ ဟန်ငြိ.မ်းဦးဆိုတဲ့ .ပေ့ချ်ကနေပြီး မျှဝေ.ဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဟန်ငြိမ်.းဦးဆိုတဲ့. ဖေ့.စ်ဘုတ်ပေ့ချ်က.တော အနုပ.ညာရှင်တွေရဲ့ နောက်.ကြောင်းနဲ့ ကေ.ာလဟ.ာလ သတ.င်းတွေကို မျှဝေနေ.တာပရိသ.တ်ကြီးအာ.းလုံးသိပြီးသား ဖြ.စ်မှာပါ။ ထိုသ.တင်းနဲ့ ပက်သ.တ်ပြီး ကာယ.ကံရှင်တ.စ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆေ.ာင် ပိုးဝတီစံ.ကအခုလိုပဲ ဖြေရှ.င်းလာပါတယ်။ပိုးဝ.တီစံ.က သူမအ.ကြောင်း.ရေးထားတဲ့ ဟန်ငြိ.မ်းဦးရဲ့ပို့စ်.ကိုShare ပြီး ရီလို.က်ရတာ သေတော့.မယ်အေ.ာက်မှာ link ချပေ.းထားတ.ယ် Sky netကလည်း လွှင့်.တယ်နော် အားပေ.းကြပါဦးရှင် ကျေးဇူ.းတင်ပါတယ်ဆိုပြီးဟန်ငြိ.မ်ဦးတ.င်ထား.တဲ့ ကျော်ရဲအေ.ာင်နဲ့ သူ.မရဲ့ပုံက ကပ်သီး.ကပ်သပ် ဆိုတဲ့ ဗီဒီယို.ဇာတ်ကား.ထဲက … Read more
ရန္ကုန္မွာ ဘတ္စ္ကားမီးရႈိ႕ ဖ်က္စီးခံရမႈ ႐ုပ္သံ
ရန္ကုန္မွာ ဘတ္စ္ကားမီးရႈိ႕ ဖ်က္စီးခံရမႈ ႐ုပ္သံ ဘစ္ကားေပၚက ခရီးသည္ေတြကို ဆင္းခိုင္းၿပီးမွ မီးရႈိ႕ ဖ်က္ဆီးသြားတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရမႈ မရွိပဲ ပစၥည္းဆုံးရႈံးမႈေတာ့ ရွိပါတယ္။ မီးရႈိ႕ခံရတဲ့ bus လိုင္းက YBS (20) ပါ။ ယေန႔ နံနက္ ၁၀နာရီအခ်ိန္ခန႔္က ျဖစ္ပြါးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္မလိုက္မွတ္တိုင္အနီးမွာ ရႈိ႕ခံရတာလို႔ သိရပါတယ္။ ထြက္ေပၚလာတဲ့ သတင္းမ်ားအရ YBS 20 လိုင္းဟာ ယခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးေနဝင္းရဲ႕ ေျမးမ်ား ေျပးဆြဲေနတဲ့ လိုင္းလို႔ သိရပါတယ္။ Video credit မူရင္း ရန်ကုန်မှာ ဘတ်စ်ကားမီးရှို့ ဖျက်စီးခံရမှု ရုပ်သံ ဘစ်ကားပေါ်က ခရီးသည်တွေကို ဆင်းခိုင်းပြီးမှ မီးရှို့ ဖျက်ဆီးသွားတာပါ။ ဒါကြောင့် ထိခိုက် … Read more
လက္ထပ္ေတာ့မည့္ ေယာက္်ားေလးတစ္ေယာက္၏ မ်ိဳးပြားအဂၤါကို ေလးခြနဲ႔ပစ္ၿပီး စမ္းသက္သည့္ အာဖရိကယဥ္ေက်းမႈ႕ ႐ုပ္သံ ပရိသတ္ႀကီးဆို႔ေရ ဒီတခါမွာေတာ့ စာဖတ္သူတို႔အဖို႔ အာဖရိက ယဥ္ေက်းမႈ တစ္မ်ိဳးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ ေယာက္်ားေလးတစ္ေယာက္ဟာ အ႐ြယ္ေရာက္လာလို႔ မိန္းမယူေတာ့မယ္ဆိုရင္ သူလက္ထပ္ယူမည့္ မိန္းခေလးရဲ႕ေဆြမ်ိဳးထဲက လူသုံးေယာက္ကိုေ႐ြးၿပီး သူတို႔ေတာ္ရမဲ့ ေယာဖျဖစ္သူရဲ႕ ေယာက္်ားေလး မ်ိဳးပြားအဂၤါကို ေလာက္ေလးခြနဲ႔ သုံးႀကိမ္ ပစ္ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေလာက္ေလးခြနဲ႔ သုံးႀကိမ္ပစ္လိုက္တာကို ခံႏိုင္ရည္ရွိေနရင္ သူတို႔ရဲ႕ ႏွမေလးနဲ႔ ေပးစားပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ႏွမေလး ပိုင္ဆိုင္ရမယ့္ ဇိမ္ခံပစၥည္းဟာ ေကာင္းမေကာင္း စမ္းသပ္ၾကည့္တဲ့သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ အဲ့ဒီ ယဥ္ေက်းမႈႀကီးက ေယာက္်ားေလးေတြအတြက္ေတာ့ တကယ့္ကို ထိပ္လန္႔စရာႀကီးပါေနာ္။ စာဖတ္သူ ပရိသတ္ႀကီးတို႔ဆိုရင္ေရာ ဒီလိုမ်ိဳး အစမ္းသက္ ခံႏိုင္ပါ့မလား။မင္မင္ကေတာ့ ေတြးၾကည့္ယုံနဲ႔တင္ ေက်ာခ်မ္းလာတာပါေနာ္။ ပရိသတ္ႀကီးတို႔လည္း က်န္းမာ၊ေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ … Read more
တစ်နေ့မှာ…လယ်သမားကြီးဟာ ကြက်ဖလေးတစ်ကောင်ကို ဈေးထဲက ဝယ်လာပြန်တယ်။ အဲဒီနောက် ကြက်ဖလေးကို သူ့ရဲ့ကြက်ခြံထဲမှာလွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ ကြက်ဖလေး ခြံထဲကို ၀င်ဝင်ချင်းမှာပဲ ကြက်မတွေအလယ်ကောင်မှာ အခန့်သားနေနေထဲ ကြက်ဖအိုကြီးတစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်တယ် ကြက်ဖအိုကြီးက “ဟေ့ကောင်လေး.. ကြိုဆိုပါတယ်” လို့ဆီးပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အိုမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ ကြက်ဖကြီးကို ကြက်ဖလေးက အဖက်မတန်သလိုနေလိုက်တယ်။ ခြံထဲမှာရှိတဲ့ ကြက်မတွေကို သူလိုက်ပြီးအကဲခတ် နေတုန်းမှာပဲ ကြက်ဖကြီးကဒီလိုပြောတယ် “ကောင်လေး..ဒီခြံထဲမှာ ကြက်မ (၂၅) ကောင်တိတိရှိတယ်။ ငါက အိုလာတော့ သူတို့ ဥဥ နှုန်းကျလာတယ်။ ဒါကြောင့် မင်းကို လယ်သမားကြီးက အသစ်ဝယ်လိုက်တာပဲ။ ငါ့ကို ငဲ့ညှာတဲ့အနေနဲ့ ကြက်မ (၂၄)ကောင်ကို မင်းယူပြီး ငါ့အတွက် ကြက်မလေး (၁)ကောင်လောက်တော့ ချန်ထားပေးပါကွာ..ဒီတစ်ခုတော့တောင်းဆိုပါရစေ” အဲဒီလို ကြက်ဖကြီးပြောတဲ့အခါ ကြက်ဖပျိုလေးက မျက်ခုံးတစ်ဖက်ကိုပင့်လိုက်တယ်။ တဟင်းဟင်းနဲ့ရယ်မောပြန်တယ်။ ပြီးတော့ဒီလိုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ … Read more
ဂန္တဝင်စာပေစာရေးဆရာများသည် သူတို့၏ဇာတ်ကောင်များ၏ မျက်ခုံးနှင့် မျက်တောင် လှုပ်ရှားမှုများကို အာရုံစိုက်စေချင်သည်မှာ အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ တစ်ယောက်ဆီကနေ အခြားတစ်ယောက်ဆီကို သတင်းအချက်အလက်တွေဝေမျှခြင်း (၉၃) ရာခိုင်နှုန်းဟာ အသံနဲ့မဟုတ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ အသံနဲ့မဟုတ်တဲ့ ဆက်သွယ်မှုမှာ body language သာမက ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေလည်း အကျုံးဝင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ တခြားလူတွေအပေါ် စကားလုံးတွေနဲ့မဟုတ်ဘဲ လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေပြောပြပေးသွားမှာပါ။ တစုံတယောက်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုရဖို့ အတွက် မျက်လုံးချင်းစုံအောင်ကြည့်ပြီး မျက်လုံးအရောင်ကို မြင်အောင်ကြည့်ပါ မိမိနဲ့မသိကျွမ်းသေတဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခု ကိုတည်ဆောက်ဖို့ အတွက် ဒီအချက်က ကူညီပေးလိမ့်မယ်။ သူတို့နဲ့ မျက်လုံးချင်းဆုံတဲ့အချိန်မှာ မျက်လုံးအရောင်ကို စစ်ဆေးဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ။ စိတ်ပညာရှင်တွေရဲ့ သက်မှတ်ချက်အရာ ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် အချိန် (၃-၅) စက္ကန့်အထိ ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာ တခြားလူနဲ့ … Read more
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အချို့ချင်းလူမျိုးများ အကြားတွင် ချင်းအမျိုးသမီးများသည် မျက်နှာပေါ်တွင် ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ အနက်ရောင် တက်တူးများထိုးသည့် ရိုးရာတစ်ခု ရှိခဲ့သည်။ ထိုတက်တူးထိုးသည့် ရိုးရာကို အမျိုးသမီးများသည် အသက်ကိုးနှစ် အရွယ်ကပင် စ၍ ထိုးလေ့ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့ မျက်နှာပေါ်တွင် တက်တူးများထိုးသည့် လုပ်ဆောင်မှုသည် မျက်နှာတစ်ပြင်လုံး မျက်ခွံများပါမကျန် ထိုးကြသည့် အတွက် အလွန်ပင် နာကျင်ရသည် ဟုဆိုသည်။ ကျေးရွာတစ်ခုစီတိုင်းသည် မတူညီသော တက်တူးပုံစံများ ထိုးတတ်လေ့ရှိသည်။ ထိုသို့ တက်တူးများထိုးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ ဘယ်ရွာဇာတိက ဟုသိနိုင်သည်။ ရိုးရာအရတော့ ထိုကဲ့သို့ တက်တူးထိုးခြင်း အလေ့အကျင့်သည် ရခိုင် ပြည်ရှိ ဘုရင် နှင့် နန်းတွင်းမှ အမျိုးသားများအား ချင်းအမျိုးသမီး ငယ်လေးများကို တော်ကောက်ခြင်း၊ ပိုးပန်းခြင်းကို တားမြစ်သော ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ တက်တူးများ … Read more